Ugcino lweeNkcukacha zokuPhucula iZindlu-iphepha 3 kwayi-79-Ibhloko yePropathi yokuthengisa izindlu nomhlaba - realtyWW:
Inkqubo yokuHanjiswa kweNdawo yokuHamba ingakunika njani inkululeko enkulu yokunyakaza
Ewe, Ukuhanjiswa kwezinto ezi-vacuum kunokukunika ukujongana nokujolise kumlo lowo unokuhlala efuna. Isitshixo kukubakhathalela de imeko ilawulwe. Akukho nto ingako yokulahlekelwa ngumgangatho kunye neenkuni ezinzima. Isithuba esigcina irejimeni evulekileyo yokujonga sinokuqalisa ukuqengqeleka. Ukugcinwa kwendawo yokubambisa ye-plush kunokuba lishishini elincinci lokukhohlisa. Akukho naphantsi kokuvulekileyo kweendlela ezininzi zokuvula ibrashi kufuneka ukhethe ngokukhetha imisebenzi esebenzayo kunye neekhaphethi ezijikeleze yona. Kukho uninzi lwezicoci zokucoca ezona zidinga ukujongana neentlobo ezahlukeneyo zekhaphethi kwaye oonotsheluza kufuneka babe yiplanga kuzo.
Ukwenza ukuba ithambe kubaqalayo
Izithuba ngamanye amaxesha zinokuba nzima ukuba zijongane nabaqengqeleki. Imithombo engapheliyo yokubeka imoto inqwelomoya kufuneka ichukunyiswe kanzima ngokwaneleyo ukuze uyiqhubele phambili ngokuqhuba. Vacuum elungileyo yomthi oqinileyo iya kuba nomsebenzi wokuwenza ngcono kwiiplanga zegama. Inketho exhasa i-vacuum yokwenza awona msebenzi mhle kuyo yonke imisebenzi kukukwenza ube kancinci
Esi isenokuba sisiqalo senkulungwane apho abacoci bezindlu baye benza iminyango yamakhaya ngeenkuni ezinzima. Oku kunokwenziwa lula ukuba umntu usebenzisa i-rolling kunye nayo. Inkqubo yokucoca inokuba sisizathu sokukhuhla okungaphezulu. Kwenza ukuba kube nzima phantsi emhlabeni. Izithuba ziya kufuneka zenze umsebenzi ongcono wokuba phakathi kweplanga leenkuni.
Ukuphatha inkqubo ephakathi
Kukho okuninzi ngaphezulu kokunikezelwa kwenkqubo okhutshiweyo kwinqanaba lomntu. Ukufakelwa kolungiso lwe-semi-esisigxina kunokubangela ukuba ukwakheka kuhle. Ukutyunjelwa kufuneka kususwe ngeendlela ezininzi. Ubumdaka kunye nobumdaka kufuneka buhambisane kakhulu nokubamba izithuba. Amalungu athile awasebenzi emva kweqela elithile leenqanaba kukho okongeziweyo okwahlukeneyo okhutshiweyo okunikwa le njongo.
Ulawulo oluqinileyo oluluqilima
Umgaqo ulula njengokunika abasebenzisi umda wokuba ukwala kususwe ngokulula. Isakhiwo sifuna ukuba nokuqokelelwa kwenkunkuma kude kumatshini omkhulu. Nangaluphi na usuku lwexesha elinokuthi lisuswe kwaye iikhonteyina zensimbi zingagalelwa ezinye izizathu. Kukho izikhululo zokudlulisela ezahlukileyo eza kunye neendlela zokulayita. Iilori ziya kufuneka zikhutshelwe amaxesha ngamaxesha. Izitya ezinkulu zensimbi kungoko kuya kufuneka zilungiswe ngenxa yesi sizathu.
Akukho ngxolo nangaphantsi
Isithuthi esiphakathi asinakuba nengxolo okanye ingxolo engaphantsi kwendawo evalelweyo yokuxhonywa kwendawo yokuhlala ilungele izizathu ezithile. Kwiimeko ezininzi, ingxolo ye-whoosh yenza ungcoliseko oluninzi lwengxolo. Iindawo zokuphila ziya kufuneka zigcwaliswe ngabacoci kwaye kwangaxeshanye zikwazi ukuba nokuziphatha okubuthathaka ukuya kumasuntswana othuli omoya.
Gqi beliswa: I-Feb 1, 2020 04: 37
Yintoni omele uyenze ngaphambi kokuba ubize iNkonzo yokuPaka ngokuNgxamisekileyo
Amaxesha amaninzi ukungqubeka kwengqondo kwenzeka ngexesha elingalindelekanga. Usekhaya ucinga ngento eza kwenzeka ukuba unokwaphula iholide okanye ngeempela veki, kwaye awazi ukuba ungenze njani ukusombulula le meko kaxakeka yeeplumbing. Ngengxaki yakho, kukho iinkonzo ezininzi zokupaka i-intanethi. Kodwa uyazi ukuba ungakanani usuku olungasebenziyo ungakuxabisa okanye zeziphi iimfuno ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuba ubabize? Siza kukuxelela apha ngezantsi: Qhubekeka ukufunda →
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo Iingxaki zokuPaka, Iinkonzo zokuPaka | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla January 13, 2020 by I-Rudyard
Gqi beliswa: UJan 13, 2020 04: 56
Ungayikhetha njani i-Microwave eyiyo
Imayrowave yinto efanelekileyo eluncedo. Ipheka ngokukhawuleza, kulula ukuyicoca. Ukongeza, ezinye iinketho zivumela ukuba ubonise imbonakalo kunye nokudala ezahlukeneyo, kunye nezitya ezinzima, kwaye ungagcini ngokushisa isobho kunye nepasta.
Inqaku liza kuthetha ngendlela yokukhetha elungileyo Qhubekeka ukufunda →
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo abaxhoziweyo, ekhitshini, Microwave | Ushiye uluvo |
Page 3 of 79<Previous1234567Okulandelayo >Last »